Bruno Fernandes oo qaadanaya tababar dheeri ah oo ka baxsan midka Manchester United – Gool FM
Haaruun May 25, 2020
(Manchester) 25 Maajo 2020. Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Bruno Fernandes ayaa qaadanaya tababar dheeri ah oo ka baxsan midka ay sameynayso kooxdiisa Manchester United.
Bruno Fernandes ayaa waxa uu la qaadanayaa tababar dheeraad ah saaxiibkiisa ay isku kooxda yihiin ee Diogo Dalot ka hor kulanka Manchester United ee la qorsheeyay inay garoommada ku soo laabto bisha soo socota.
Xiddiga khadka dhexe ee reer Portugal ayaa bandhig ilqabad leh sameeyey saddexdii bilood ee ugu horreysay kaddib markii uu kaga soo biiray Sporting Lisbon bishii Janaayo ka hor inta aan faafaha Coronavirus loo hakin ciyaaraha Premier League.
Fernandes ayaa ku soo laabtay tababarka koox-koox yar loo qaadanayey isbuucii hore markii ugu horreysay tan iyo bishii Maarso, iyadoo maamulka Premier League ay indhaha ku hayaan inay dib u bilowdaan horyaalka bartamaha ilaa dabayaaqada bisha June.
Si uu u gaaro taam ahaansho waqtiga ugu fiican ee soo laabashada weyn, 25-sano jirkaan ayaa sidoo kale ka qeyb qaadanayay tababaro gaar ah oo uu la qaatay Macallinka RH Elite ee Manchester.
Shirkadda RH Elite ayaa baraheeda xiriirka bulshada ku soo bandhigay muuqaal muujinaya Fernandes oo kubad baas-baas ah oo martaabasho ah la la dheelayo kaddibna kubadda ku laadaya shabaq ka fog oo uu goolhaye waadiye ka hayo waxaana muuqanaysa inuu birta garaacay.
First of many videos from our sessions with @B_Fernandes8 and @DalotDiogo 👍🏻⚽️🔥#rhelitecoaching #brunofernandes #diogodalot #stephenireland #manchesterunited #premierleague pic.twitter.com/z4m5fnkzT2
— RH Elite Coaching (@RHEliteCoaching) May 21, 2020
Bruno Fernandes ayaa gacan ka geystay lix gool ay dhaliyay Man United sagaal kulan oo uu u saftay ka hor saddexdii bilood ee la soo dhaafay.